musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Nhamba yenyika dzakarohwa neOmicron itsva musiyano urikura
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mukati mekutya kwepasirese kwakamutswa naOmicron, nyika zhinji dzakadzoreredza zvirambidzo zvekufamba mukuyedza kudzikamisa kupararira kwayo.
Sezvo Omicron musiyano wehutachiona hweCCIDID-19 hwakatanga kuwanikwa muSouth Africa, nyika zhinji pasi rese dziri kuudza kusvika kweiyo dhizaini kunharaunda yadzo.
New COVID-19 strain ine chekuita nemishonga sezvo ichigona kupa dambudziko kune vaccine. Nekudaro, World Health Organisation (WHO) inosimbirira kuti hapasati paine humbowo hwesainzi nezvekuti zviratidzo zvehutachiona zvakakura sei kana zvichienzaniswa nezvimwe zvakasiyana zveCCIDID-19.
Zvichakadaro, pakati pekuvhunduka kwepasirese kwakamutswa omicron, nyika dzakawanda dzakadzoreredza zvirambidzo zvekufamba mukuedza kudzikamisa kupararira kwayo.
Chitatu chakaona United States of America taura nyaya yekutanga yenyika yakasimbiswa yeOmicron variant muCalifornia, mushure mekunge mufambi, akange akabayiwa zvizere, adzoka kubva kuSouth Africa munaNovember 22. Nyika yakasarudza kuda bvunzo dzisina kunaka mukati mezuva rimwe rekufamba kune vese vanosvika, vangave vanobayiwa kana kuti kwete.
Vakuru venzvimbo vakawana nyaya nhatu dzeOmicron, imwe pachitsuwa cheIndian Ocean cheReunion uye imwe mbiri muFrance. Muzviitiko zvose, vanhu vakanga vachangobva kufamba muAfrica.
Nhasi, India yakazivisa nyaya dzekutanga dzakasimbiswa dzenyika mushure mekunge varume vaviri mudunhu reKarnataka vaongororwa vane hutachiwana mushure mekudzoka kubva kunze kwenyika. Vakaiswa pasi pekucherechedzwa nevakuru vehurumende uye vese vekutanga nesekondari vanosangana navo vari kuteverwa nekuongororwa.
Nyika yeNordic yakasimbisa huwandu hwehutachiona hweCCIDID-19 mutation, kunyangwe mumwe wevakabatwa achizivikanwa kuti akaenda konzati ine vanhu zviuru zviviri vaivepo vasati vaongororwa. Kunyange mutemo wenyika hausati waunzwa, Denmark yakavhara chikoro chaive nemhosva yaifungidzirwa nekutya kuti inogona kukonzera kubuda kwakawanda.
Vanhu vaviri mudunhu reWest Coast yeOeygarden vakaongororwa vane hutachiwana omicron neChitatu, zvichicherekedza nyaya dzekutanga mutsauko muNorway, sezvo dunhu rakatambura nechirwere chetachiona izvo zvakakonzera kuomeswa kwezvirambidzo zvemuno. Chinonyanya kunetsa kuvakuru, nyika parizvino iri kuferefeta nyaya dzakawanda dzinosvika makumi mashanu dzine chekuita nemabiko eKisimusi.
Mushure mekudzoreredza zvirambidzo zveCCIDID-19, zvinosanganisira mamask mandates, iyo UK Health Security Agency yakasimbisa kuti, muEngland neScotland, makumi matatu nembiri nyaya dzemhando nyowani dzakaonekwa, nepo Northern Ireland neWales vasina kunyora hutachiona hutsva hwevakachinja. strain.
Vakuru vehutano vakanyora zviitiko zvipfumbamwe zvakasimbiswa zve omicron strain, nehutachiona husere muNew South Wales uye imwe muNorthern Territory. Vakuru vakaisa nyika payambiro, vachityira kuti kungangove nezviitiko zvakawanda mushure mekunge mumwe wevanhu vane hutachiona ashanyira nzvimbo yezvitoro yakabatikana asati aongororwa.
Musi weChina, Finirendi uye Singapowo yakasimbisa kuvepo kweiyo strain itsva, nepo Romaniya wotyirawo kuti yatova nenyaya imwe chete.